‘सिस्नु’ प्रकृतिको एउटा बरदान हो, जसले च्वाट्टै पार्छ यी रोगहरु जान्नुहोस ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस – Annapurna Daily
‘सिस्नु’ प्रकृतिको एउटा बरदान हो, जसले च्वाट्टै पार्छ यी रोगहरु जान्नुहोस ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
On Jun 6, 2021 16,262
सिस्नोको प्रयोग गर्ने विधि: १० ग्राम सिस्नोको धुलोलाई २ सय मिलिलिटर तातो पानीमा मिसाएर रातभरि भिजाएर छोडिदिने र बिहान खाली पेटमा खाने । यसरी नियमित रुपमा प्रयोग गर्दा छोटो समयमै यसबाट फाईदा लिन सकिन्छ ।
नेपाल विकास उन्मुख राष्ट्र भएको हुँदा देशमा पाइने जडीबुटी संकलन गरी प्रशोधन गरि औषधिको रुपमा विदेश पैठारी गर्न सके राष्ट्रले राम्रो आम्दानी गर्न सक्थ्यो र रेमिट्यास र वैदेशिक सहयोगको भर पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने थियो । एजेन्सीको सहयोगमा